TTSweet: အော်ဇီ ပီအာ လျှောက်ရအောင် (၁) ...
Posted by T T Sweet at 12:55 PM
Thanks ma sweet,i like this post
shin February 24, 2011 at 2:38 PM
မှတ်သားသွားပါတယ်။ တကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ Post လေးပါ။ Share ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သက်ဝေ February 24, 2011 at 3:42 PM
Tun Tun February 24, 2011 at 5:48 PM
Thank for the post. By the way which agent u used? can you share?
T T Sweet February 24, 2011 at 5:59 PM
We applied PR3years back. Now we try to contact, they are no longer there already. There are alot of Aussie agents in Singapore.
ဖိုးတုတ် February 24, 2011 at 7:20 PM
အော်ဇီကို အလည်တော့သွားချင်တယ် ၊ ရန်ကုန်ခဏခဏပြန်တာနဲ. အော်ဇီသွားဖို.လက်မှတ်ဖိုး မရှိတော့ဖူး ၊ မတီတီဆွိနှင့် မိသားစု အော်စီမှာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေဗျာ ၊ အော်စီရောက်ရင်လည်း ပို.စ်မှန်မှန်တင်ပါဗျာ မတီတီဆွိ ဘလော့ကို အမြဲတမ်းအားပေးနေပါ့မယ် ၊
TZA February 25, 2011 at 7:42 AM
ကျေးဇူးပါတီဆွိ၊ မှတ်သားသွားပါတယ်။ အော်ဇီမှာအဆင်ပြေပါစေ။
Mg kyaw Zaw February 25, 2011 at 12:20 PM
လသာည February 26, 2011 at 1:13 PM
တော်တော့်ကို စုံစုံလင်လင် တင်ပြပေးထားတာပါ..။ ဗဟုသုတလည်း ရ၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောပြလိုက်ဦးမယ်။
ဦးခြိမ့်နဲ့ မဆွိကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။
jsn_woo February 26, 2011 at 10:32 PM
Item5(occupation in demand) is no longer valid and we can't claim for that point since Feb 2010.
Sandar March 5, 2011 at 11:55 AM
thanks for this post. Justaquick question: Is it OK to apply PR as an IT professional without havingajob in Ausi? or I can apply it only after I've gotajob there.
T T Sweet March 5, 2011 at 12:12 PM
You need to calculate the points first whether you can apply or not. You can apply PR without havingajob, sure.
အင်ကြင်းသန့် October 21, 2011 at 3:42 PM
Thanksalot for the knowledge!!! :)